Chengeta Mapepanhau Anoburitswa mune yako 2009 Yekushambadzira Sarudzo | Martech Zone
Chengeta Mapepanhau Anoburitswa mune yako 2009 Yekushambadzira Sarudzo
China, January 29, 2009 Douglas Karr
Shamwari yakanaka Lorraine Bhora, uyo anomhanya an Indianapolis yekushambadzira agency inonzi Roundpeg, yakashanda neni pamusoro pegore rapfuura pane akati wandei vatengi. Chimwe chezvidzidzo zvangu chandakadzidza kubva kuna Lorraine ndiko kushamisika kusvika kune izvo zvinoburitswa zvichiri kuwana. Zvinoshamisika kuti mangani zvitoro zvinodhindisa kuburitswa - uye mangani ayo anozopedzisira apinda mumablog. Izvi zvinogona kuve zvakakura backlinking, chiremera, uye kuburitsa izwi kunze kukambani yako.
Zvichida chinonyanya kuzivikanwa ndechekuti haufanire kumirira kuti chiitiko chikuru chiitike kukambani yako kuti ubudise chishambadziro. Chinhu chakareruka sekuzivisa kwewebhuinar kana chidzidzo chetsva chinhu chakakura zvinhu! Usadzikise kuburitswa kwemapepanhau mune yako 2009 Marketing zano. Kutenda kuna Scott Whitlock pa Flexware Innovation, kambani yekugadzira tekinoroji. Scott akandisiira tsamba ndikabvunza nezvezvitoro zvePR zvandakambokurudzira uye ndakafunga kuti zvaizoita yakanaka blog positi.
Izvo zviteshi ndizvo PRWeb uye PRLeap kana iwe uchizviitira-iwe-pachako mushambadzi. Kunyora Press Kuburitswa idiki diki yeunyanzvi fomu kana uchinyatsoda kuti vawane makumbo, zvakadaro. Fonera Lorraine kana uchida rubatsiro ipapo!
Tags: coca-colaconversion ratee-zvekutengesakern
Kushambadzira kune Chinangwa, Kwete eyeballs
Maitiro Ekusarudza iyo Webhu Dhizaini
Kutenda kune iyi link uye noti Doug. Tichave tichiwedzera mashandisiro edu ekushambadzira pamhepo gore rino. Kubatsira kwako kwandiri pachangu kwave kushamisa!
Kukadzi 14, 2009 na3: 40 PM
Thanks for the link .. Ok, saka ndakazvikanganisa sei? Anofanira kunge anga akarara pairi vhiri. Vhidhiyo yakanaka zvakare!